पत्रकार महासंघ कास्कीकाे अध्यक्षमा बिमला भण्डारी बिजयी – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. पत्रकार महासंघ कास्कीकाे अध्यक्षमा बिमला भण्डारी बिजयी – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीकाे अध्यक्षमा बिमला भण्डारी विजयी भएकी छन् । भण्डारी विजयी भएसँगै महासंघले पहिलाे पटक महिला नेतृत्व पाएकाे छ । काँग्रेस निकट प्रेस यूनियन, माअाेवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर र चाैतारी माधव नेपाल समूहकाे गठबन्धनकाे नेतृत्व लिएकी भण्डारीले प्रेस चाैतारी र प्रेस मञ्च गठबन्धनका केशव शरण लामिछानेलाई ५३ मतले पराजित गरेकी हुन् ।
बिमलाले १७४ मत प्राप्त गर्दा केशवशरणले १२१ मत ल्याए । यस्तै, उपाध्यक्ष खुल्लामा बिमला प्यानलकै रामप्रसाद तिमिल्सिना बिजयी भए । उनले चाैतारीका अर्जुन गिरीलाई ५० मतले पराजित गरेका हुन् । रामप्रसादले १७४ मत ल्याउँदा अर्जुनले १२२ मत ल्याए । महिला उपाध्यक्षमा जमुना वर्षा शर्माले जितिन् ।
केशव शरण प्यानलकी उनले रबिना अालेलाई ८ मतले हराइन् । जमुनाकाे १५१ र रबिनाकाे १४३ मत खस्याे । सचिवमा केशव शरण प्यानलबाट प्रेस चाैतारीका माधब बरालले १४ मतले दीपक परियारलाई जिते । माधवले १५५ र दीपकले १४१ मत ल्याए । सहसचिव खुल्लातर्फ बिमला समूहका श्रीराम सिग्देलले जिते । श्रीरामले १७७ मत ल्याउँदा प्रतिष्पर्धी चाैतारीका एमबी अास्था मगरले ११५ मत ल्याए । ६२ मतकाे अन्तर रह्याे । सहसचिव समावेशीतर्फ रेम बिक विजयी भए । उनले १६८ मत ल्याए भने चाैतारीतर्फका दीपक के. श्रेष्ठले १२४ मत ल्याए । ४४ मतले यूनियनका रेमले जितेका हुन् । काेषाध्यक्षमा बिमला समूहबाटै कृष्ण दवाडीले जीत हात पारे । सेन्टरका दवाडीले चाैतारीका एकराज गिरीलाई ६४ मतले पछाडि पारे । दवाडीले १७७ र गिरीले ११३ मत ल्याए ।
सदस्य महिला तर्फ सपना अधिकारी विजयी भइन् । उनले १४८ मत ल्याउँदा तारा चापागाईं दुवे १० मतले पछि पर्दै १३८ मतमा सीमित भइन् । दलित सदस्यमा विजय नेपाली बिजयी भए । १५६ मत प्राप्त गरेका विजयले चाैतारीका सुरेश सुनार (१२६) लाई हराए। सदस्य जनजातिमा यूनियनका पदम श्रेष्ठ (१५६) ले खिमा कुमारी गुरूङलाई पराजित गरे । अन्य समावेशी तर्फ जैनव खातुनले १८३ मत प्राप्त गर्दै जीत हात पार्दा चाैतारीका सूर्य बहादुर परियारले १०१ मत ल्याए । सदस्यहरूमा २२ जना प्रतिष्पर्धा गरेकाेमा ९ जना समेटिनुपर्नेमा धन बहादुर गुरूङ (सुमन) १५२, शिवराज बस्ताकाेटी १४३, कञ्चन थापा १३०, गीता राना मगर १२९, प्रभु अधिकारी १२८, सन्ताेष बस्याल १२४, सन्ताेष सुवेदी १२९ युवराज गुरूङ (युनिश) १३१ र हरि पन्त (१३५)विजयी भए । राष्ट्रिय परिषद सदस्य जनजाति तर्फ राजबहादुर गुरूङ विजयी भए भने । खुल्ला ४ जनामा कमल पाैडेल अथक १५०, श्यामनाथ कुँवर १४२, अारजु बिष्ट सल्यानी १२६ र गंगाधर पराजुली १२६ विजयी भए ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 8, 2021 April 8, 2021 150 Viewed